umatshini wealfalfa pellet othengisayo.alfalfa pellet yokwenza umatshini wokubasa ipetroli okanye okondlayo
Amandla:7.5kw,isigaba esinye okanye izigaba ezithathu
Umthamo:200~ 400kg / h
Yintoni i-alfalfa kwaye kutheni ukhetha ialfalfa?
UAlfalfa, wonke umntu uyazi, lelona dlelo libanzi emhlabeni. Ezona mpawu zibalulekileyo ze-alfalfa yeyona nto inamandla kunye nesantya sokukhula. Ingaphezulu kwaye inemveliso kangangokuba inokukhula ngaphezulu 20 iminyaka kwaye uvunelwe 1-13 amaxesha ngamaxesha ngamnye wokukhula. Aba balinganiswa bayenza ingathandwa kakhulu kukondliwa, kodwa yenze nokuba ibe sisixhobo esilungileyo semveliso yeepilisi ze biomass. Ngomatshini wealfalfa pellet, Unakho ukusebenzisa ngokulula kunye nokusebenzisa ngokupheleleyo ialfalfa yokwenza ipelletizing nguwe. Inesantya sokukhula ngokukhawuleza kwaye unako ukuziqhelanisa ngokulula nokusingqongileyo. Ke ngoko, isivuno sayo siphezulu kakhulu. Xa isetyenziswa njengokutya kwesilwanyana, inokuba negalelo kwisondlo esikhulu.
Xa isetyenziswa njengamafutha, kufuneka yomiswe, kuba ialfalfa emanzi ayitshisi kakuhle kwaye ngokupheleleyo.
Zithini iAlfalfa Pellets ezisetyenziselwa ikakhulu?
Iipellets zeAlfalfa zingasetyenziselwa ukongeza iikhalori ekudleni kwehashe. Ngumthombo omkhulu weekhalori zamahashe, kuba bakwimo yenkunkuma.
I-forage esekwe kwiikhalori ayiyi kubangela ezininzi zeengxaki ezondla iswekile eninzi kunye nesitatshi, njengokhozo. Babonelela ngeekhalori ngaphandle kwe “kushushu” into. Uninzi lwamahashe phaya aluyi kufumana “kushushu” kwi-alfalfa.
Uyenza njani ialfalfa kwiipellets?
Umatshini ka-Alfalfa pellet Luhlobo lweemayile zepellet ezilungiselelwe ngokukodwa ukwenza ialfalfa pellets. Ngokwesiqhelo ii-alfalfa pellets zisetyenziswa njengokutya kweenkomo okanye isichumisi okanye ipetroli. Kodwa kuye kwaqondwa ngokubanzi ukuba banokusetyenziselwa ii-pellets zeoyile ukutshisa.
Xa uza kuhamba ngepelletize, inyathelo lokuqala lokomisa ialfalfa kude kufike ixesha lokufuma 15%. Izinto ezingamanzi okanye ezomileyo ziya kuchaphazela umgangatho wokugqibela wee-alfalfa pellets. Ungabhenela kwisomisi, ukuze ufumane umswakama ofanelekileyo ngokukhawuleza. Okanye ungayomisa ngokwemvelo.
Inyathelo lesibini ekufuneka uyenzile kukugaya i-alfalfa. Uhlobo lwentsusa yealfalfa ayilunganga ukuba umatshini we-alfalfa pellet uqhubele phambili ngqo. Xa uyigrumba kwi powders ezincinci, umgangatho we-pelletizing kunye neepellets ziya kuba ngcono.
Ke elona nyathelo libalulekileyo ndiyeza. Beka ialfalfa kwi-feeder yealfalfa pellet mill, baya kuxinzelelwa kwimingxunya ebotshiweyo kwi-die kwaye ikhutshiwe kumatshini. Ke yonke le nkqubo igqityiwe. Kodwa unakekele ubushushu obuphezulu beebomom pellets. Baza kukutshisa ukuba kwenzeka nantoni na ethe ngqo. Linda umzuzu, emva koko unokujonga eyakho ialfalfa pellets.
Ipharamitha yobugcisa yoMatshini kaAlfalfa Pellet
(kg / h) Isantya
(r / imiz) Ubungakanani
I-VTKLP150 4 100~ I-150 320 0.78*0.32*0.75
Ividiyo yomatshini wealfalfa pellet